La xidhiidh Östersunds kommun - Östersund.se
/ Soomaali (Somaliska)
/ La xidhiidh Östersunds kommun
La xidhiidh Östersunds kommun
Naga caawi inaanu yarayno ku faafida cudurka dugsiga barbaarinta
U guur Degmada Östersund
Waxbarashada qofka weyn oo dhinaca Lärcentrum (Xarunta Waxbarashada)
العربية English Farsi Svenska ትግርኛ
Gelitaanka degmada Östersund Kundcenter, taas oo ku taalo Rådhuset ee Östersund.
Waxaad la soo xidhiidhi kartaa Östersunds kommun addoo booqanaya, soo wacaya ama warqad noogu s qoraya anaga. Markaad nala soo xidhiidho, waxaa lagugu soo hagaajin doonaa adeegayaga macmiilka. Adeegayaga macmiilka waxaa loogu yeedhaa Kundcenter.
Dadka ka shaqeeya Kundcenter waxaa loogu yeedhaa kommunvägledare ( la taliyayaasha degmadda). Waxay bixin karaan caawimo.
Kundcenter waxay furantahay Isniinta ilaa Khamiista 08.00-17.00 iyo Jimcaha 08.00-16.00.
Na soo booqadka
Kundcenter waxay ku taalaa Hooolka Magaalada (Rådhuset) xaga Rådhusgatan 21.
Kundcenter waxaad ka heli kartaa caawimo si aad u buuxiso foomamka, u hesho macluumaad qoran ama u hesho jawaabaha su’aalaha guud.
Waxaad sidoo kale amaanaysan kartaa kombuyuutar si aad u raadiso macluumaadka ama u isticmaasho adeegyadayada korontada ah.
Degmada Kundcenter (Xarunta Macaamiisha) ee Hoolka Magaalada (Rådhuset) ee Östersund.
Na soo wacida
Lambarkyagaa telefoonku waa 063-14 30 00.
Markaad na soo wacdo waxaad maqli doontaa cod ku akhriyaaya macluumaad Af Swedish.
Haddii aad 8 cadaadiso waxaad maqli doontaa macluumaad lagu akhriyayo Ingiriisi. Codadka waxa y ku waydiinayaan inaad cadaadiso batanka iyaddoo ku salaysan waxa aad doonayso inaad waydiiso.
Haddii aanad aqoon ka uu yahay batanka adiga kugu habboon su’aashaada waxaad sugi kartaa. Waxaa markaa laguu gudbinayaa ka u horeeya ee kommunvägledare ee la heli karo.
Shanta lambar ee aad dooran kartaa waa:
”Socialt stöd och omsorg” – Su’aalaha khusaysa, tusaale ahaan, daryelka waayeelka ama naafadda, caawimada bulshadda (försörjningsstöd), ama su’aalaha khuseeya taageerada bulshadda iyo daryeelka.
”Skola, förskola och vuxenutbildning” – Su’aalaha ku saabsan dugsiga, dugsiga barbaarinta, hawlaha raaxaysiga ama waxbarashadda dadka waa wayn iyo SFI.
”Fastigheter, byggande, gator och miljö” – Su’aalaha ku saabsan dhismaha, jiddadaka iyo baabuurta, biyaha iyo dhuumaha dhulka hoostooda ay maraan ama arrimaha deegaanka.
”Kultur, fritid, anställning, politik och inflyttarfrågor” – Su’aalaha khuseeya u guurida, Östersund, shaqooyinka banaan, xeerarka ama arrimaha dhaqanka iyo raaxaysiga.
”Företag” – dooro tan haddii aad leedahay ganacsi ama haddii aad su’aal ka hayso ku saabsan ganacsiga iyo warshaddaha.
Warqad noosoo qorida
Waxaad noogu soo qori kartaa saddex qaab, iimayl ahaan, warqada ama foomka websaydka.
Markaad waraaq noo soo qorayso waa ay wanaagsantahay haddii aad si cad u sharaxdo waxa aad doonayso inaad ogaato ama aad doonayso inaad noo sheegto. Haddii su’aashaada ay khusayso dugsiga, waa inaad sheegtaa dugsigu kuu yahay, haddii ay khusayso shay dhacay ama la mid ah, markaa way fiicantahay haddii aad sheegto meesha iyo goorta.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad noo jawaabto, waa inaad sidoo kale sheegtaa sida aanu kuula soo xidhiidhi doona.
Haddii aad rabto magacaaga wa la qarinayaa.
U soo qorista iimayl Östersunds kommun
Haddii aad doonayso inaad iimayl noo soo dirto, u soo qor cinwaanka kundcenter@ostersund.se.
U soo qorida waraaqda Östersunds kommun
Haddii aanad doonayn inaad warqad caadi ah noo soo qorto, waa inaad u soo dirtaa cinwaankan:
Waxaad sidoo kale u qaadi kartaa warqaddaada Kundcenter xaga Hoolka Magaalada (Rådhuset). Haddii aad doonayso inaad anaga warqad nooga tagto marka Kundcenter uu xidhanyahay, waxaad sidaa ku samayn kartaa sanduuqayaga waraaqaha. Sanduuqa warqaddaha ee xaga dambe ee Hoolka Magaalada, ee ku calaamadsan sawirka ilaa midigta sida ”Ingång från baksidan”.
Addoo fariin noogu soo qoraya websaydkayaga
Waxaad si toos ah noogu soo qori kartaa dhexda foomkayaga xdhiidhka . Sidoo kale waxaad ku lifaaqi kartaa faylalka ama waxaad muujin karaa waxyaabo ku yaala khariidada foomka xidhiidhka haddii aad jeceshahay.
Haddii ay degdeg tahay - fiidadka iyo dhammaadka todobaadka
Haddii ay fiid tahay ama dhammaadka todobaadka oo aad leedahay xaalad degdeg ah oo aan sugi karin inta Kundcenter ay furmayso, waxaa jira khadadka caawimada oo kala duwan oo waxaad ka soo waci kartaa.
Waxaa jira lambaro telefoon oo kala duwan oo ah alaabaha kala duwan.
Biyaha iyo dhuumaha biyaha qaada
Soo wac 063-14 37 00 haddii biyahaagu liigayaan ama hadii biyahaagu ay fadhiisteen ama midabkoodu isbeddelay.
Carruurta iyo dhalinyara lagu xad gubayo, rabshada xidhiidhada dhow ama dadka qabatima maandooriyaha ee u baahan caawimo aad ah
Soo wac booliska (114 14) ama Digniinta SOS (112) haddii ay aad u degdegtahay oo aanad sugi karin ilaa todobaadka dambe si aad caawimo u hesho.
Dhibaatooyinka gudaha mid ka mid ah dhismayaasha degmadda
Soo wac 063-14 32 21 si aad uga warbixiso dhibaatooyinka darran ee dhismaha degmaddu leedahay.
Haddii aad ku nooshahay Östersundshem oo aad la kulmayso dhibaatooyin, waa inaad la xidhiidhaa khadka caawimada Östersundshem.
Shaqaalaha daryeelka -- adeega caawimada guriga iyo guriyaynta gaarka ah
Haddii aad doonayso inaad la soo xidhiidho shaqaalaha mid ka mid ah kooxahayaga caawimada guriga, waxaad ka soo waci kartaa lambarka tooska ah ilaa goobtooda shaqada . Waxaad soo waci kartaa ilaa 22.00. Habeenka waxaad soo waci kartaa roondadda habeenka.
Waxaad ka soo waci kartaa shaqaalaha degmadda guriyaynta gaarka ah saacad kasta haddii aad donayso inaad qabsato. Riix linkiga sare oo raadi magaca guriyaynta iyo raadinta magaca ee guriyaynta aad doonayso inaad soo wacdo liiska dhinaca bidix ee bogga.
Husbilsparkering nedanför Jamtli! - 1 underskrifter
Gång och cykelvägar - 4 underskrifter
Gör ett övergångsställe mellan Västfjällvägen och Storfjällvägen. - 27...